डी कप बिग ब्रेस्ट्स २ 24 घण्टा भित्र स्पट सेक्स डल्स सेल्लामा पठाइयो
डी कप सेक्स पुतली,स्टकमा सेक्स डलहरू
स्टकमा + नि:शुल्क २ विग + नि:शुल्क २ जोडी आँखाको बल + स्ट्यान्डिङ + श्रग + डल क्लिनिङ पम्प सेक्स डल
स्टक सेक्स गुडिया लागि मानक सामान:
"1.138cmS सानो छाती #160
2. Wigs: 2, चित्रमा देखाइएको रूपमा
3. आँखाको रंग: कालो
4. गिफ्ट आइबलहरू: खैरो
5. छालाको टोन: गाढा खैरो
6. Areola रंग: देखाइएको रूपमा
7. तल्लो शरीरको रंग: पूर्वनिर्धारित
8. तल्लो शरीर: एक टुक्रा
9. कपाल रोप्ने कि छैन: छैन
10. खडा भए पनि: हो
11. काँधहरू: श्रग
12. नेल रङ: पूर्वनिर्धारित
13। उपहार उपसाधन:
पुतली सफा गर्ने पम्प (SKU: SP00401)
निर्माता र नियमित वितरकहरू:
√ निर्माता: Urdolls
√ आधिकारिक अधिकृत पुनर्विक्रेता: Urdolls.com
√ सबै अर्डरहरूमा नि: शुल्क शिपिंग।
√ प्याकेजहरू पठाउने बित्तिकै ट्र्याक गर्न सकिन्छ।
√ रसद: UPS (सबैभन्दा छिटो 2-6 व्यापार दिन) (अमेरिकी आदेश मात्र)। मुख्यतया अमेरिकाबाट जहाजहरू।
√ तपाईंले भुक्तान गर्न निम्न भुक्तानी विधिहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, सबै Urdolls भुक्तानीहरू हुन् १००% सुरक्षित र विवेकी
√ क्रेडिट कार्ड
√ भुक्तान गर्न कार्टमा सिधै थप्नुहोस्
√ भुक्तानी पछि, तपाईंले अर्डर पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यो सेक्सन गुडिया अमेरिकाको गोदाममा समातिएको छ र जहाज पठाउन तयार छ। यदि तपाईं छिटो शिपिंग सेक्स डॉलको चाहानुहुन्छ र अनुकूलनको बारेमा यति धेरै ख्याल राख्नुहुन्न भने इन-स्टक पुतलीहरू उत्तम हुन्छन्। एक पटक तपाईंको अर्डर भएपछि तपाईंको पुतली १-२ व्यवसाय दिन भित्र बाहिर पठाउँनेछ र तपाईंको ढोकामा 1- business व्यापार दिन (यूएसए मात्र) पुग्नेछ।
मोर्गन कुर्सीमा बस्छिन् र एक सेक्स पुत्राको कल्पना गर्छन् जब ऊ डान्स गर्छ ...
California क्यालिफोर्नियामा स्टक। ❤ अमेरिकी डेलिभरी समय to देखि business व्यवसाय दिन। ❤ १००% जोखिम-मुक्त। यी यौन पुतलीहरू अमेरिकाको गोदाममा राखिएका छन् र जहाज पठाउन तयार छन्। यदि तपाईं छिटो शिपिंग सेक्स डॉलको चाहानुहुन्छ र अनुकूलनको बारेमा यति धेरै ख्याल राख्नुहुन्न भने इन-स्टक पुतलीहरू उत्तम हुन्छन्। एक पटक यो ...
विन्नी- सेतो सूट लगाएको सेक्स डल बेडको छेउमा बसेर हेर्दै...
मेरो प्रेमिका र मैले डिपार्टमेन्ट स्टोर लिफ्टलाई दुई तल्लाको बीचमा रोक्यौं र केहि रमाइलो गर्ने निर्णय गर्यौं। मैले उनको गुलाबी प्यान्टीहोज प्रकट गर्न उनको सेतो डेनिम स्कर्ट माथि तानें। उनले थोङ्ग अंडरवियर लगाएकी थिइन्, र उनको गधा र गालाहरू पेन्टीहोजबाट कम्मरसम्म स्पष्ट देखिन्थ्यो। मैले घुमाएपछि...
Cordelia-WM गोरा कपाल ठूला स्तन M-cup150cm प्यारा र आकर्षक ...
म अर्को सहकर्मीसँग अफिसमा काम गर्छु। उनले आफ्ना तीन सन्तानसँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् । उनी ३० वर्षकी भइन् र म २० वर्षको । अधिकांश समय, हामी परिवार, जीवन, र कहिले काँही यौन बारे कुरा गर्छौं। उनी मलाई सम्झाउन चाहन्छिन् कि तीन वर्ष पहिले उनको सम्बन्धविच्छेद पछि उनले कहिल्यै यौन सम्पर्क गरेकी छैनन्। मलाई थाहा थियो कि उनी के हुन् ...
हाम्रो प्रतिबद्धता: Urdolls ले तपाईंलाई एक पेशेवर निर्माता WM Doll द्वारा बनाएको उच्च गुणवत्ताको सेक्स पुड़ाहरू प्रदान गर्दछ। WM Doll TPE सामग्री पर्यावरण अनुकूल, गैर-विषाक्त र मानव शरीरको लागि हानिकारक हो; यसको उन्नत र अद्वितीय उत्पादन प्रक्रियाको साथ मिलेर, सेक्स गुड़ल उत्पादनको सतह छाला ...
मिया डब्ल्यूएम १164 J सीएम जे कप बिग ब्रेस्ट टान स्किन टीपीई लव गुड़िया
मिया पृष्ठभूमि कथा: हामी दुबै हाम्रो श्रीमानको रूपमा एकै विभागमा काम गर्छौं, तर हामी महिनौंदेखि फ्लर्ट गर्दैछौं। मेरो श्रीमान् दिनमा काम गर्दछन्, तर म रातमा काम गर्दछु। एक रात, हामीले अन्ततः एक अर्कालाई कबूल गर्यौं कि हामी दुवैले आफ्नो काम अगाडि बढाउन चाहान्छौं, र अन्तमा हामीले आईएम मार्फत साइबर सेक्स गरेका थियौं ...
एलेनोर १158 सीएम कप कप प्रकृति छाला ठूलो स्तनहरू WM TPE सेक्स डल
एलेनोर पृष्ठभूमि कथा: म 32२ बर्षको थिएँ र उनी २० वर्षकी थिइन। कमसेकम यो भन्न सकिन्छ कि हामी सँगै पहिलो चोटि कागजात थिए। लगभग दुई हप्ता पछि, जब सेक्सको विषय आयो, तिनीहरू फोनमा कुरा गरिरहेका थिए। मैले उनलाई भने कि यो मेरो लागि करीव सात महिना भयो, जुन सर्प ...
पेनेलोप १164 सीएम जे कप ट्यान छाला बिग ब्रेस्ट WM TPE सेक्स डल
पेनेलोप पृष्ठभूमि कथा: यो बेलुका :9: ०० थियो र म मेरी प्रेमिकासँग थिएँ। हामी करीव तीन महिनाको लागि सँगै छौं। हामी मेरो छात्रावासमा थियौं र उनले भनिन् कि उनी मेरो लि su्ग चुस्न चाहन्थिन्। मैले भनें, हो, उसले मेरो झिंगा फुकाल्न शुरू गर्यो। अब, मैले धेरै कडा मेहनत गरेको छु, र मेरो डिक मेरो खुला बाहिर पप ...
एरिया - १174 सीएम जी कप कप डब्ल्यूएम हेड लाइट छाला टीपीई सेक्स डल
स्कार्लेट पृष्ठभूमि कथा: पहिलो चोटि मैले यौन सम्बन्ध राखेको १ years वर्षको थियो। मेरो प्रेमी जो me महिना को लागी मसंग थियो १ 17 वर्षको थियो। उनी र मैले एक पटक प्रेम गर्ने कुरा गरेका थियौं तर उनले मलाई कहिले जबरजस्ती गरेनन्। एक रात, उहाँ मेरो विन्डोमा आउनुभयो। म चकित भएँ, मैले उसलाई मेरो कोठामा हालें र उहाँसँग ओछ्यानमा पल्टें। यो ...